Mid ka mid ah Xiddigaha ugu caansan Caalamka oo Alabiitarihii Qiyaano ku dilay (Daawo Muuqaal ahaan Alabiitarihii oo Dhulka laga soo qaaday) !! - iftineducation.com
iftineducation.com – Kaptanka kooxda Benfica Lisbon ee horyaalka dalka Portugal Anderson Luis da Silva Luisao ayaa waxa uu ku kacay Fal qiyaano ah oo nuuciisa aanan mudooyinkaan dambe lagu arkin Maslaxa ciyaaraha Kubada cagta.
Kulan dhex maray kooxda Fortuna Düsseldorf oo ka dhisan horyaalka dalka Germany iyo naadiga Benfica Lisbon ee horyaalka dalka Portugal ayuu Ciyaaryahan Anderson Luis da Silva Luisao waxa uu iska dhigay shaqsi kala dhicinaya Xiddig Jaale la siinayay iyo alabiitaraha balse waxa uu Qiyaano dhulka la dhigay Alabiitare lagu magacaabo Christian Fischer kaas oo 42 jir ahaa.
Ciyaaryahan Luisao ayaa si farsameeysan jooga uga riday Alabiitare Christian Fischer waxaana Telefishinada Caalamka laga daawanayay Alabiitarihii ama Garsoorihii Ciyaarta oo wareeray kaas oo Dhulka kula dhacay Jaalihii uu watay wuxuuna u ekaa ruux garab iyo Awood lagu jahwareeriyay. Anderson Luis da Silva Luisao oo dhanka Difaaca ka ciyaara waxa uu u dhashay dalka Brasil waana Xiddig ay ka qeeyliyeen Qiyaanadiisa faraha badan Laacibiin caan ah gaar ahaan Difaaca kooxda Man Utd Rio Ferdinand oo ay Xiddigaan fooda is dareen.
Waqtiga la dooranayo Gudoonka Baarlamaanka oo la shaaciyay iyo Gudoomiye KMG ah oo hada lagu dhawaaqay